Shiinaha Yaskawa Motoman Gp7 Qabashada Robot warshad iyo soosaarayaasha | Jiesheng
Yaskawa Mashiinka Warshadaha MOTOMAN-GP7waa aalad yar oo robot ah oo loogu talagalay maaraynta guud, taas oo buuxin karta baahiyaha adeegsadayaal fara badan, sida qabashada, gundhigga, isu geynta, shiida, iyo ka shaqeynta qaybaha ballaaran. Waxay leedahay culeyska ugu badan ee 7KG iyo kordhinta jiifka ugu badan ee 927mm.
Yaskawa Industrial Machinery MOTOMAN-GP7 waa aalado yar oo cabbir ah oo loogu talagalay guud ahaan la tacaalida, taas oo dabooli karta baahiyaha adeegsadayaal aad u tiro badan, sida qabashada, duubista, isu geynta, shiida, iyo ka baaraandegidda qaybaha waaweyn. Waxay leedahay culeyska ugu badan ee 7KG iyo kordhinta jiifka ugu badan ee 927mm.
MOTOMAN-GP7 waxay isticmaashaa tiknoolajiyada ugu dambeysa ee xakameynta dhaqdhaqaaqa waxayna qaadataa qaab-dhismeed gacmeed godan, kaasoo ku dari kara fiilooyinka dareemayaasha iyo dhuumaha gaaska si loo yareeyo faragelinta u dhexeysa cududda iyo qalabka durugsan. Xawaaraha isku-darka wuxuu qiyaastii 30% ka sarreeyaa nooca asalka ah. , Xaqiiji yareynta waqtiga taatikada, si weyn u wanaajiya waxtarka wax soo saarka. Cusboonaysiinta qaabdhismeedka mashiinka waxay xaqiijineysaa rakibid is waafajin waxayna kordhisaa awoodda wax qabashada. Marka la barbardhigo moodooyinka hore, waxay ku guuleysatay xawaare sare oo sax ah iyo saxnaan sare.
Qeybta curcurka ee MOTOMAN-GP7 maaraynta aaladdawaxay qaadataa heerka IP67, kaasoo hagaajinaya waxqabadka faragelinta kahortaga qaab dhismeedka wax soo saarka, waxaana loo jiidi karaa hoos u dhigma dusha hoose ee wadajirka. Kumaaraynta aaladda GP7 wuxuu yareeyaa tirada fiilooyinka inta udhaxeysa golaha kontoroolka iyo golaha kontoroolka, wuxuu hagaajiyaa joogtaynta iyadoo la siinayo qalab fudud, taasoo si weyn u yareyneysa waqtiga badalka fiilada joogtada ah iyo dayactirka fudud.
Qabashada Robot Sawiro ：
Isku darka MOTOMAN-GP7 maaraynta aaladdaiyo golaha xakamaynta YRC1000micro waxay dabooli karaan baahiyaha kaladuwan ee danabyada kaladuwan iyo tilmaamaha amniga adduunka oo dhan. Tani waxay u oggolaaneysaa GP-ga robot-ka inuu gaaro howlaha ugu habboon ee la qabtay iyo inuu si dhab ah u gaaro dhaqdhaqaaqyada ugu sarreeya adduunka. Xawaaraha, saxnaanta dhabbaha, u adkaysiga deegaanka iyo faa'iidooyinka kale.
Xiga: Yaskawa Motoman Gp8 Handling Robot
Aaladda otomaatiga ah ee Robot, Nidaamyada Maaraynta Qalabka Robotka, Robotka Gacanta otomaatiga ah, 6 Axis Qabashada Robot, Warshadaha Qabashada Warshadaha Gacanta, Qabashada Gacanta Robot,